Hawk's Nest Beach Shandukakukwi ku Old Lyme, Connecticut
Nyika dzakabatana Connecticut
Hawks Nest Beach Indwara yeIndaneti ku Old Lyme, Connecticut
Hawk's Nest Beach Resort inzvimbo yakagamuchirwa nemhuri yezororo iri mu Old Lyme, Connecticut. Yakatangwa naCharles Garvin muna 1985, uye iye zvino ichiri kuchengetedzwa naGarvin nemhuri. Imba yacho inosvika makumi mana nemanomwe edzimba dzakakodzwa, matare maviri etiketi, nzvimbo yekutengesa, uye gungwa reHawk's Nest Beach.
Dzimba dzinowanikwa dzinowira pasi pemapoka mana akasiyana:
• Waterfront, iyo inowanikwa zvakananga pamhenderekedzo yegungwa,
• Mvura inoona, iyo iri kunze kwegungwa,
• Munda wekuona, uri pedyo nedare tennis, uye
• Nyaya yose, iyo inogona kubhadharwa munguva yechando.
Zvinhu zvinobatanidza kusanganisira Wi-Fi access, televivhoni yepahwindo yakagadzikana, firimu yefesheni, uye mashizha / dryer michina, pamwe chete nemiseve uye quilts inowanikwa mune imwe kamba. Imba yakakura inobva pakamuri imwe yekamuri kusvika kumakamuri mana, uye imwe imba yekodha inobhadharwa kwevhiki nevhiki.
Shanduro inoshandiswa, inonzi Garvin's Store, inopa zvokudya zvinosarudzwa, pamwe chete nezvinhu zvekupedzisira, semabhanhire, zvigadziri, uye zvipfeko zvechiyeuchidzo. Kayaks inogona kukodzwa kubva muchitoro.
Cottage kitchens zvakachengetedzwa nemidziyo, vaiti vekofi, uye microwaves. Ruzhinji rwedzimba idzi dzinoshandisa moto uye dzinoongororwa-mumapango. Mutambo unowanikawo mumakamuri ose. Pikiniki mahwendefa anowanikwa yose munzvimbo yese.
Grills inogona kukodzwa kubva kune imwe nzvimbo inoshevedza inonzi Grill Guys, iyo inowanika kuunza uye kugadzira grill grill yevashandi vanoshandiswa.
Bhoti haigoni kukodzwa panzvimbo yacho, asi chikepe chinotanga mapeji chiri munzvimbo dzinoverengeka pane imwe nzvimbo.
Kugadziriswa kwakarongwa chete kuburikidza newebsite. Imwe makumi mashanu ekubhadhara mari inotarisirwa mukati memazuva gumi ekugadzirisa, iyo yose iyo inofanira kubhadharwa pachitarisa munzvimbo yacho. Vaparidzi vanopomerwa mhosva yekusakosha kusingakoshi kana mishonga yakaitwa mukati memakamuri; varimi vanobatwa nemhosva yekugadzirisa chikwereti vasati vatarisa.
Zvose kuongorora uye kutarisa kunoitwa musi weMugovera, kunze kwekukumbira mukati-nguva. Mutero unogamuchirwa kuburikidza neVisa uye MasterCard.
Zvimwe, mibvunzo chaiyo inogona kupindurwa kuburikidza nefoni kana e-mail.
Nzvimbo yacho inopa mabasa ezuva nezuva kuvana, purogiramu yacho inobudiswa vhiki rese. Zvinhu izvi zvinogona kusanganisira zviratidzo zvetarenda, mafirimu emhuri, zvigadzirwa zvemhizha uye zvemhizha, mitsva yekutsvaira, uye mutsara weimba yechando. Chishanu roga roga, kuratidzwa kwetarenda kunobatanidzwa kwemazera ose, kunze kwechitoro chakanaka. Uyezve, gungwa rinoshanwa vhiki negaine nenyadzi yezvinyorwa mumvura kubva kuProjekti Oceanology, kupa maoko-kudzidza pamusoro pegungwa uye zvisikwa zvakawanda.
Matare eTennis anogona kushandiswa chero nguva, asi tennis racquets neshangu hazvipi zvakapiwa nehotera.
Nsikiti yeHawk inopemberera Zuva reUkuzvidzivirira nechitarisiko chinotungamirirwa nevana vanogara panzvimbo yacho, pamwe chete nemabasa akawanda emutambo.
Nzvimbo iyi webhusaiti inopawo urongwa hwezvitsuwa zvinotaridzirwa kune vezororo kuti vaongorore. Urongwa urwu runosanganisira Mystic Aquarium, Essex Steam Train, Mystic Seaport, Block Island Ferry, Fox Hopyard Golf, uye makamisiyamusi maviri akasiyana.
Nzvimbo yekugara yemhuri inogara ichitsvaga maitiro akanaka kwazvo pawebsite dzekufambisa dzakadai sa Trip Advisor.
Inonyanya kurumbidzwa nekuda kwekunyarara, nzvimbo yekuzorodza, iyo isingasviki nemapoka evanhu vakawanda vakaita semhenderekedzo yegungwa. Bhuku rako rinotevera runyararo uye rinotora zororo pa Hawk's Nest Beach Resort.
Mitambo paFoxwoods: Kubva Bingo kusvika kuKadhi Card Poker
Foxwoods Mitsara uye Mazano Okufambisa
Ice Skating Places in Central CT
Ndinowana Sei Kadhi Yevatariri vokuMexico?
Ramba Iko Local OK
Nzira Yokuenda Sei Tai O
Best Best Gelato Shops
Iwe Unofanirwa Here Kuunza Bhuku Rako Pamashizha Pamba Raunotevera?
Kutarisa kuSouth Africa Yakanaka Cape Point
Brookside Gardens of Lights: 2017 Krisimasi Kuratidzwa